Ailurophilia kana kuda katsi | Noti Katsi
Chii chinonzi ailurophilia?
La ailurophilia ishoko rine chirevo rinogona kuunza nyonganiso. Muchokwadi, zvakajairika kufunga kuti iri izwi rinoratidzira chimwe chinhu chakanaka, asi muchokwadi iri maitiro ehunhu anoshamisa kwazvo. Kana tikafunga nezvekwakabva izwi iri, tichaona kuti rinobva muchiGiriki ailuros zvinoreva kuti katsi, uye uzivi hunoshandurwa serudo. Iri izwi richiri kusazivikanwa zvakanyanya pakati pevagari, kunyangwe Royal Spanish Academy haina kuipinza muduramazwi.
Kana iwe uri muteveri weblog, zvirokwazvo iwe wawira murudo nechitarisiko uye hunhu hweshamwari yako ina-makumbo mana, kana ini ndakanganisa? Vanhu vane furry vanoziva kuzviita vanodiwa, kunyangwe iwe wanga usiri kuronga kuve nemhuka nyowani pamba pakutanga. Zvisinei, unofanirwa kuziva kuti muganho uripi.
1 Chii chinonzi ailurophilia?
2 Ailurophilia separaphilia
2.1 Ailurophilia yakabatana ne hoarding kusagadzikana
3 Ndezvipi zvikonzero
5 Kwete yekusavhiringidzwa neNoah Syndrome
6 Katsi, mutoro
Ailurophilia iparaphilia, ndiko kuti, maitiro ehunhu hwepabonde mune iyo huru sosi yekunakidzwa iri, mune ino katsi. Izvo, saka, seti yemanzwiro asiri iwo ayo mhuka idzi anomutsa mune vamwe vanhu.
Zviratidzo zveparaphilia zvinoenderana nerudzi rwekutsauka pabonde. Muchiitiko cheailurophilia, vanhu vanogona kuve fungidziro dzepabonde, hunhu hwakabatana nekushandiswa kwezvinhu zvakaumbwa sekatsi, farira kupfeka semhata kana kuona munhu akapfeka saizvozvo, ... Muchidimbu, idambudziko rinogona kutadzisa munhu kurarama hupenyu hwakajairika.
Mupfungwa iyi, vanhu vanogona kupa madhigirii akasiyana echiitiko ichi uye ndosaka zvakakosha kuti uzvione munguva. Tevere, isu tiri kuzokuudza iwe nezve mamwe emapoka aripo zvichienderana nezvakanangana nezviratidzo zvinogona kutambura.
Mune ino kesi, munhu anonzwa kuda kwakakosha kumhuka, mune ino kuenda kumakati. Munhu wacho haazvione sedambudziko nekuti anonzwa rudo rwake sechinhu chakajairika uye chechisikigo. Vanonzwa zvakanaka kuva nekatsi uye hazvifanirwe kutungamira kune yakasarudzika maitiro.
Kana tichitaura nezvekusagadzikana, isu tave kutoreva izvo kuti panogona kuve nedambudziko chairo mumaitiro emunhu anokwezva katsi. Kukwezva uku kunogona kupedzisira kwave kuita shungu. Kana izvi zvikaitika, kusagadzikana kwepfungwa kunogona kuoneka nekuda kweparaphilia (kukwezva kusingadzoreki katsi).
Mune ino kesi, panogona kuve nekutsauka pabonde uko rudo rwavanonzwa kumhuka kune chinhu chepabonde. Vanhu vane rudzi urwu rweparaphilia vanogona kusarudza kuti voita zvavanofunga here kana zvirinani kusaite. Kunyangwe nekungove nemhando idzi dzepfungwa, kutarisirwa kwepfungwa kana kwepfungwa kwakatodiwa.
Kana munhu aine mhando iyi yekusagadzikana kazhinji vanonetseka kurarama hupenyu hwakajairika, chimwe chinhu chinozokubata iwe pachako nehunyanzvi.
Ailurophilia yakabatana ne hoarding kusagadzikana
Pazasi isu tinokuudza iwe kuti haufanire kuvhiringidza kusagadzikana uku ne "Noah Syndrome", asi zvakakosha kuti uzive kuti hoarding kusagadzikana idambudziko repfungwa apo munhu anogona kuunganidza mhuka zhinji asina kudzichengeta, saka katsi dzinogona kupedzisira warwara kana nematambudziko akakomba ekushamwaridzana. Kana munhu aine chirwere ichi kazhinji hauzive zviri kuitika kwauri uye kurapwa kunova kwakaoma nekuti vanofunga kuti havadi rubatsiro.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise izvo zvinogona kukonzeresa zvikonzero kuti uwane kurapwa kwakakodzera mune yega yega nyaya. Hazvinyatso kuzivikanwa kuti chii chinokonzeresa ailurophilia, kunyangwe ichifungidzirwa kuti zvinhu zvakasiyana zvinogona kutora chinzvimbo. Mupfungwa iyi, zvakakodzera kufunga nezvazvo:
Majini. Munhu ane rudzi urwu rwechibereko anogona kuve nenguva iri nyore yekutarisa pane mamwe mamiriro kana mhuka.
Zviitiko zvinoshungurudza. Zviitiko zvinoshungurudza nemhuka idzi muhudiki zvinogona kukonzera maitiro asina kujairika kukura muhupenyu hwevakuru.
Unhu hunhu. Kune humwe hunhu hunhu kana kunyangwe hosha dzepasi dzinogona kuita kuti iyi syndrome iite seyakanyanya yekumanikidza kusagadzikana kana vamwe.
Kurapa kunoitwa kuburikidza Kutarisisa kwepfungwa, uye dzimwe nguva, nemishonga yepfungwa. Kunge chero kusagadzikana kwepfungwa, iyo nguva yacho inoenderana zvakanyanya nemurwere.
Kwete yekusavhiringidzwa neNoah Syndrome
Ailurophilia haifanire kuvhiringidzwa neNoah Syndrome. Avo vane ailurophilia vanogona kugara nekatsi uye nekuvachengeta zvakanaka, asi vanhu vanobatwa nayo Noa chirwere ivo havanzwe chero mhando yekukwezva zvepabonde kukati. Vanogona kuvada, hongu, kusvika padanho rekuvatora vachitenda kuti vanovaponesa. Zvisinei, chokwadi chakasiyana kwazvo.
Zvipfuyo zvinogona kunge zvichitarisirwa zvakanaka pakutanga sezvo paine mashoma, asi sezvo akawanda achiunzwa mukati, pakupedzisira rega kumachengeta, zvirinani chaizvo. Nekudaro, nekufamba kwenguva mhuka dzinomanikidzwa kugara munzvimbo dzinotyisa, pasi petsvina yavo uye weti. Uye kana mumwe munhu achida kuvanzwira tsitsi, munhu akabatwa anongoramba kutorwa; zvakanyanya zvekuti zvinowanzo fanirwa kuitwa kuburikidza nematare.
Katsi mhuka dzakazvimirira uye diki, saka dzinowanzo kuve dzinovaraidza dzinodiwa dzevaya vanobatwa nechirwere ichi, kunyangwe kupfuura imbwa. Kufunga izvi, Chero nguva nyaya painenge ichizivikanwa, zvakakosha kuti ubate mapurisa, kuti zvinakire mhuka, uye zvakare nevanhu vakanganiswa.
Kubva panguva yekutanga yatinoita sarudzo yekuisa kati muhupenyu hwedu, isu takazvipira chengeta uye uremekedze Kwemakore ese aanogara padivi pedu. Muchengeti akanaka anokuendesa kun'anga, kukupa chikafu chitsva uye nemvura yakachena mazuva ese, kukupa iwe nzvimbo yekuzorora uye nenzvimbo yekutamba, uye zvakanyanya kukosha, iye achakupa yakawanda, yakawanda rudo zuva nezuva.
Hapana mhuka inofanirwa kuunzwa kumba nechido, ndoda kuzadzisa chishuwo chisina kunakaAsi nekuti iwe unonyatsoda kugara nayo. Izvo zvinofanirwawo kutorwa mupfungwa kuti, kunyangwe katsi dzakazvimiririra kupfuura imbwa, ichocho hachisi chikonzero chekuva nadzo kunze pasina kudzora kana pamba wega zuva rese. Iwe unofanirwa kushandisa nguva nemhuri yako, uye iite kuti uite iwe unzwe senge uri chikamu chayo, zvikasadaro unotanga kufinhwa saka woita zvinhu zvausingafanire kuita, sekukwaya midziyo uye / kana maketeni, kuruma, kugara wakasurukirwa, uye / kana kuita weti kubva mutray.
Kana iwe uchida kugoverana hupenyu hwako nemhuka inogona kurarama kweanenge makore makumi maviri, uye panguva iyo ichaita kuti usekerere zviri nyore, zvino ndiyo nguva yekuti utange kutsvaga ichava shamwari yako nyowani. Zvikasadaro, zvinokurudzirwa kumirira zvishoma kusvikira nguva yakakodzera kwazvo yasvika.
Kurega uye kushungurudzwa kwemhuka matambudziko maviri anokuvadza zvakanyanya katsi. Ivo chete vanovada chaiko, ndiko kuti, vese avo vane ailurophilia, senge iwe, vanoziva izvozvo iyo chete nzira yekuti rimwe zuva isu tirege kunetseka nezve idzi nyaya inotanga chaizvo nekuita sarudzo yakanaka. Zvese zvimwe zvinouya mumashure, kunyangwe neutering kana kuripa, zvese zviri zviviri zvakakosha kuvhiya kudzivirira mamwe makiti akasiiwa.
Kana iwe uine rudo rwechokwadi rwekati, ivo vanozokutenda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Chii chinonzi ailurophilia?
Iyo ailuraphilia harusi rudo kana kufadza katsi ... Icho chimiro cheparaphilia (maitiro ehunhu hwepabonde). Izvo zvinoshandura mukukwezva zvepabonde kumakati ...
Hazvina basa kuti vamwe vanhu vanoti chii. Ini ndiri mudikani uye mudziviriri wekiti.
armandale lievano akadaro
Mwari mafungiro api andinawo katsi nhatu uye ndinovanamata semhuka dzinovaraidza dzinonzwa kukwezva pabonde yatove nharo muchokwadi uye kungobvisa chete kunogona kufunga kuti nekuda katsi pane kukwezva kwazviri! Ini ndichaongorora mukati mako isu tine kugona sevanhu kusiyanisa. Na Mwari kupenga kupi.
Pindura kuna Armandale lievano
Ehe, inopenga, senge "filia" ese (zoophilia, pedophilia, nezvimwewo).
Katsi dzinogona kudiwa, kuremekedzwa, kuchengetwa, icho chinhu chinofanirwa kuitwa muchokwadi, asi haufanire kuvabata zvisina kunaka kana kuvamanikidza kuti vaite zvinhu zvavasingade. Ivo felines, ivo zvikara, uye kwete matoyi.
Ndanga ndichitsvaga uye izwi racho rinongoreva rudo, hazvirevi kutsauka pabonde kana nemanzwiro, zvakanaka nguva dzose kusagadzira uye kutenderedza kukoshesa kwechokwadi muchinhu chinorwara uye chakamonyoroka, etymologically "filia" zvinoreva rudo nechidakadaka. kwete kureva bonde chete. Saka tarisa zvaunowana usati waisa chimwe chinhu !!!!
Aurora, ndizvo zvatakaita. Pakutanga isu takafunga kuti zvaireva izvo, kuda katsi, uye isu takanyatsoita chinyorwa pane icho chinyorwa. Asi mushure mekuiongorora takaona kuti yakanga isina kudaro. Zvakafanana nepodophilia kana zoophilia. Icho chirwere.
J. im akadaro
Sekutaura kwaMonica, Aurora, izwi musimboti rinogona kuratidza kuti, rudo rwemakati, asi kushandiswa kweshanduro »- filia» muchiSpanish kuratidza kusagadzikana (pedophilia, zoophilia ... nezvimwewo) zvinoita kuti izwi, kazhinji, zvinonzwisiswa neimwe nzira.
Muchidimbu, zvirinani kuti "mudiwa wekati", iwe unodzivirira kutaridzika kusingazivikanwe, uye zvinoreva chinhu chimwe chete, asi pasina icho chirevo chepabonde.
Pindura kuna J. im
Wese kutaura kwakanaka .asi chokwadi ndechekuti kune miganho .shoko rinoti ... filia nezvose zvarinoreva ... kufarira hazviitike Kune chimwe chinhu chebonde isu tatoziva. Asi izwi iri harisi redu.
Ini ndinobvumirana zvachose, Jazmin. Ndatenda nekutaura kwako 🙂
Hongu, zvakakosha kuvaziva. Iri rakasarudzika izwi rinowanzo shandiswa zvisirizvo, izvo zvinogadzira nyonganiso.
Isu tinotarisira kubatsira kugadzirisa kusava nechokwadi kupi kungamuka mune izvi.
Liz grenda akadaro
Ini ndakada katsi kubvira ndichiri mudiki ndine chinonakidza kwavari, ndiri musikana ane makore 9 ekuberekwa uye handinzwisise mushe zvinoreva revo yechiGiriki.
Pindura kuna Liz Grenda
Ailurophilia chirwere chine vamwe vanhu.
Gara nechakanaka chinhu, chiri chekuti unofarira kitsi 🙂. Mushure mezvose, ndicho chinhu chakanyanya kukosha.
Kubva pazera ripi iro kati inogona kugezwa